12W « MMWeather Information BLOG
အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း TRAMI ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on August 21st, 2013%
အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း TRAMI(12W) ဖိလစ်ပိုင်အမည် MARING သည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမြောက်ဘက်၊ တိုင်ပေမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၉ဝ ခန့်မှ ဖြတ်ကျော်၍ တရုတ်ပြည်မ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေ FUJIAN ပြည်နယ်သို့ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။(ပုံ-၁)
မုန်တိုင်း အရွယ်အား အချင်းမိုင် ၂၂ဝ ခန့်ရှိပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂၃ဝ နာရီတွင် FUJIAN ပြည်နယ် ကမ်းခြေမှ မိုင် ၁၉ဝ ခန့်သာ ကွာဝေးတော့ကြောင်း၊ အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 290 degress) သို့ တစ်နာရီ ၁၇ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝ နာရီ(ဒေသစံတော်ချိန် သြဂုတ်လ ၂၂ . . . → Read More: အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း TRAMI ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 12W, MARING, Phillipine Sea, TRAMI, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, အပူပိုင်းမုန်တိုင်း မုန်တိုင်း TRAMI အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည်
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း TRAMI – 12W (ဖိလစ်ပိုင်အမည် MARING) သည် ယခင်ခန့်မှန်းထားသည်လောက်အားကောင်းလာခြင်း မရှိသော်လည်း အရွယ်အစားအားဖြင့် အချင်း ကီလိုမီတာ ၇၂ဝ အထိရောက်ရှိလာကြောင်း တွေ့ရပြီး အနောက်ဘက် Heading 278 degrees သို့ ချိုးကွေ့လာသဖြင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်း တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရမည့် အန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းနိုင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
Trami (Maring) is expected to gain strength within the next 12 to 24 hours…and could becomeaTyphoon on Wednesday afternoon. Advance Intensity . . . → Read More: မုန်တိုင်း TRAMI အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည်
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 12W, MARING, Phillipine Sea, TRAMI, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, အပူပိုင်းမုန်တိုင်း မုန်တိုင်း TRAMI – Ryukyu ကျွန်းအား သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် အစောပိုင်းတွင် ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်မည်
By mmweather.ygn, on August 20th, 2013%
သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း TRAMI (12W)(ဖိလစ်ပိုင်အမည် MARING)သည် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ Rukyu ကျွန်းစုအား ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအချိန်တွင် မုန်တိုင်းဗဟို၌ လေတိုက်နှုန်း 65 knots မှ 70 knots အထိ ရှိနိုင်ပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ဦးတည်ရွေ့လျား ဖြတ်ကျော်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
သြဂုတ်လ ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ မုတ်သုန်လေအားကောင်းနေမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွင် တွေ့ရပါသည်။ (အောက်ပုံ)
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 12W, MARING, Phillipine Sea, TRAMI, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, အပူပိုင်းမုန်တိုင်း ဖိလစ်ပိုင် ပင်လယ်ပြင်မှ မုန်တိုင်း TRAMI-12W မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း TRAMI(12W) (ဖိလစ်ပိုင်အမည် MARING)သည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်း တိုင်ပေမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၉ဝ ခန့် အကွာ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုပြုနေပြီး သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ လာမည် ၁၂ နာရီအတွင်း အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 324˚)သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 12W TRAMI 20 Aug 2013 0000Z Location: 21.9 128.5 Winds: 55 knots Central Pressure: 982 hPa
ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသဌာန TYPHOON-2000 ခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ချက်အရ လာမည့် ကြာသပတေးနေ့(၂၂-၈-၁၃)ဒေသစံတော်ချိန် နံနက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းသည် အားအကောင်းဆုံး အခြေအနေသို့ . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင် ပင်လယ်ပြင်မှ မုန်တိုင်း TRAMI-12W မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 12W, MARING, Phillipine Sea, TRAMI, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, အပူပိုင်းမုန်တိုင်း မုန်တိုင်း TRAMI-12W ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on August 19th, 2013%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 12W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီအချိန် ရရှိသည့် အချက်အလက်များမှ စတင်၍ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း(Tropical Storm)12W TRAMI အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 13W မှာ ပျက်ပြယ်သွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်(တနင်္လာနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 50 knots ရှိသည့် အားကောင်းသော မုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာနမှ MARING ဟု အမည်ပေးထားကြောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည်မှာ TRAMI ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည် TRAMI မှာ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ၏ . . . → Read More: မုန်တိုင်း TRAMI-12W ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသို့ ဦးတည်လျှက်ရှိ
One comment မုန်တိုင်းသတင်း 12W, MARINE, Phillipine Sea, TRAMI, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, အပူပိုင်းမုန်တိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 12W နှင့် 13W တို့ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on August 17th, 2013%
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင် မြောက်ပိုင်း ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီး၌ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98W သည် ယနေ့ (သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်) နံနက်ပိုင်းတွင် ရရှိသော အချက်အလက်များအရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 12W ဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း(သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင်မီ) မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာကာ ပုံပါလမ်းကြောင်းအတိုင်း ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမှ ဖြတ်သန်းပြီး အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိစဉ် အဆင့်-၁(CAT-1) မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် အဖြစ် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော INVEST 99W သည်လည်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 13W အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတောင်ဘက်၌ . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 12W နှင့် 13W တို့ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 11W, 12W, 13W, East Phillipines Sea, EAST-CHINA-SEA, South China Sea, UTOR, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIKUI အကြွင်းအကျန် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ
12W HAIKUI – 10 Aug 2012 0000Z Location: 30.3 117.0 Winds: 25 knots Central Pressure: 1004 hPa
MTSAT ဂြိုလ်တုမှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် တိမ်တိုက်အား သြဂုတ်လ . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIKUI အကြွင်းအကျန် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ
Leaveacomment မိုးရေချိန်-ရေကြီးမှု ခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 12W, HAIKUI, TYPHOON မိုးများနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထပ်မံ ရွေ့လျားလာဘွယ်ရှိသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန်များ
By mmweather.ygn, on August 9th, 2012%
သြဂုတ်လ ၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများနှင့် လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များ(animation) အရ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIKUI ၏ အကြွင်းအကျန်များသည် ဗီယက်နန်၊ လာအိုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။ တရုတ်ပြည်မကြီး တောင်ပိုင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီးပါက လာအ်ုနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသများသို့ လာမည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှလည်း နောက်(၂)အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးပိုလာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သဖြင့် မိုးများမည့်အခြေအနေ၊ မြစ်ရေမြင့်တက်မှု အခြေအနေများကို ကာကွယ်၊ ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြစေရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန်များကို animation link မှ တစ်ဆင့် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါသည်။
. . . → Read More: မိုးများနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထပ်မံ ရွေ့လျားလာဘွယ်ရှိသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန်များ
Leaveacomment မိုးရေချိန်-ရေကြီးမှု ခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း, ရေကြီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ 12W, HAIKUI, TYPHOON အိုကီနာဝါကျွန်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး Zhejiang ပြည်နယ်သို့ ဦးတည်နေသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIKUI
အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း အိုကီနာဝါ ကျွန်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး တရုတ်ပြည်- အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေ၊ Zhejiang ပြည်နယ်သို့ ဦးတည် ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်း HAIKUI သည် လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း Zhejiang ပြည်နယ် ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုမီ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း HAIKUI ၏ အရွယ်အစားမှာ အချင်း ၈၇၀ ကီလိုမီတာ(၄၇၀ နော်တီကယ်မိုင်) ရှိသည့် ကြီးမားသော အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မုန်တိုင်းဗဟို၌ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၆၅ မိုင်မှ ၈၀ မိုင် နှုန်းရှိနေပြီး၊ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ဖြင့် ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ ပိုမိုအားကောင်းသည့်လေပြင်းများ တိုက်ခတ်ခံရနိုင်ကြောင်း၊ . . . → Read More: အိုကီနာဝါကျွန်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး Zhejiang ပြည်နယ်သို့ ဦးတည်နေသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HAIKUI
4 comments မုန်တိုင်းသတင်း 10W, 12W, EAST-CHINA-SEA, HUIKAI, NW-Pacific, REMAINANTS OF SAOLA, TYPHOON တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း SAOLA အကြွင်းအကျန်တိမ်တိုက်များနှင့် မိုးရွာသွန်းနိုင်မည့် အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on August 4th, 2012%
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် တိမ်တိုက်များသည် တရုတ်ပြည်မကြီး အနောက်တောင်ကမ်းရိုးတန်းအတိုင်း အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပြီး ဟောင်ကောင်/မကာအိုတို့ အပေါ်မှ ဖြတ်ကျော်ကာ ဟိုင်နန်ကျွန်း မြောက်ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတွက် လာမည့် ၇၂ နာရီ(သြဂုတ်လ ၇ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၉၃၀ နာရီအထိ) မိုးရွာသွန်းနိုင်မည့် အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ပုံနှင့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိကာ တရုတ်ပြည် တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအား ထပ်မံဝင်ရောက်ဦးမည့် မုန်တိုင်း HAIKUI(12W) အခြေအနေအား အောက်တွင် တင်ပြထားပါသည်။
သြဂုတ်လ ၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် တွေ့မြင်ရသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အကြွင်းအကျန် တိမ်တိုက်များ ရွေ့လျားမှု အခြေအနေ(အောက်ပုံ) လာမည့် တနင်္လာနေ့(သြဂုတ်လ . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း SAOLA အကြွင်းအကျန်တိမ်တိုက်များနှင့် မိုးရွာသွန်းနိုင်မည့် အခြေအနေ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 10W, 12W, EAST-CHINA-SEA, NW-Pacific, REMAINANTS OF SAOLA, SAOLA, TYPHOON Older Entries »